Khubarada Q M ee qaabilsan cunna-qabateynta hubka Soomaaliya ayaa ka hadlay diiwaan gelinta ciidamada Soomaaliya. - Awdinle Online
Khubarada Q M ee qaabilsan cunna-qabateynta hubka Soomaaliya ayaa ka hadlay diiwaan gelinta ciidamada Soomaaliya.
November 20, 2019 (Awdinle Online) – Golaha Amniga oo ay diyaariyeen Khubarada qaabilsan cunna-qabateynta hubka ee saaran Soomaaliya iyo Eritrea, waxaa lagu eegay hir gelinta qorshaha ku meel gaadhka Soomaaliya ee la qaatay April 2018, kaas oo ku talagalku yahay in masuuliyadda nabadgelyada lagala wareego AMISOM oo lagu wareejiyo ciidamada nabadgelyada Soomaaliya marka la gaaro 2021, arintaas oo ku beegmi doonta bixitaanka AMISOM.
Warbixin ka koobnayd in ka badan 160 bog, oo ay diyaariyeen khubaro Qaramada Midoobeey u qaabilsan arrimaha cunna-qabateynta hubka ee Soomaaliya iyo Eritrea ayaa looga hadlay diiwaan gelinta ciidamada Soomaaliya.
Waxa intaa dheer in qiimeynta howlgalka gobolka ee AMISOM ee la sameeyay muddadii u dhexeysay March 2018 illaa January 2019, in laguna ogaaday in ay jireen 20,000 oo askarta dawlad goboleedyada ah oo aan hoos tagin taliska dawlada federaalka ah iyo dhismeyaasheeda.
Warbixintii AMISOM waxa kale oo ay sheegtay in inkasta oo xoogag gobolku ay qaateen tabobarro hadana aanu mushaharka si joogto ah loo siinin oo aanay haysan qalab iyo gaadiidka asaasiga ah.
In ciidamada maamul goboleedyada ay qeyb ka noqdaan Hannaanka Qaran ee Nabad Gelyada, wuxuu muhiim u noqon doonaa suuro gelinta bixitaanka AMISOM ee la qorsheeyey. Khubaradu waxay haatan qiimaynayaan in ay suurto gal noqon karto bixitaanka AMISOM ee la filayo 2021.
Sida ku taal qoraalada ay gudida u soo bandhigtay dawlada Federaalka ahi waxay dhamays tirtay wejigii koobaad ee diiwaan gelinta ciidanka dabayaaqadii March 2019, taas oo ah tallaabo togan oo xagga nabadgelyada loo qaaday.
Khubaradu waxay derseen diiwaan gelinta saddex qaybood oo ka mid ah ciidanka qaybta 60-aad (Baydhabo), Qaybta 12-ka April (Mudisho), iyo Xerada Janaraal Gordon (Muqdisho), waxaanay is barbar dhigeen qoraallada diiwaan gelinta ee soo gaadhay SEMG oo uu ka muuqdo mushaharka kuwii la diiwaan geliyey illaa February 2019.
Tiradaas 277 askari ee qaybta 60-aad waxa loo qaybiyey hub 53 keliya oo noqonaysa shan meeloodow meel. Askarta ciidanka ayaa ku jiray diiwaanka bishii February 2019. Waxa markaa ay u muuqataa in shan meeloodow afar ka mid ah askarta qaybta 60-aad, waxa la ogaaday in aanay ku jirin diiwaanka oo aanay ka tirsanayn ciidanka.
7 August 2018, waxa SEMG la siiyey muunayo laga qaaday qoraallada mushaharka la siiyay Ciidamada Xoogga Dalka, oo ku taariikhaysnaa 2017, oo ay ku jiraan magacyada iyo lambarka 384 askari oo ka tirsan qaybo kala duwan ee ciidanka qaybta 12-a April ee fadhigeedu yahay Muqdisho oo ay ka mid yihiin Birjeex iyo Danab iyo guutada 2-aad iyo 4-aad .
Illaa 60 ka mid ah khubaradu waxay garteen in 262 askari oo qiyaastii saddex meeloodow laba wadarta guud ah oo magacyadooda iyo kaararkooda aqoonsigu ku jireen qoraalada lacag bixinta ee ku taariikhaysa February 2019.
Lafa gurku waxa uu sidoo kale iftiimiyey farqi weyn oo u dhexeeya askarta la diiwaan geliyey iyo kuwa qoran:
Wadarta guud ee saraakiisa (saajin ilaa birigeediyer) oo ay ku jiraan kuwa ku qoran qoraallada 2017 waa 171. 156 ka mid ahi waxay ku jiraan qoraallada mushaarka lagu bixiyey oo markaa ay ka noqonayaan 91 boqolkiiba.
213 ka mid ah askarta qaybta 12-ka April oo darajadoodu gaar tahay ayaa lagu qoray diiwaankii 2017. 106 ka mid ah waxay ku jireen diiwaanka 2019 oo ka dhigan wax ka yar boqolkiiba 50.
Previous articleHoggaamiyihii Hore Ee Dalka Jarmalka Adolf Hitler Hoygii Uu Ku Dhashay Oo Loo Bedelay Xarun Boliis
Next articleMadaxtooyada oo ka socda Kulan albaabada u xiran Madaxweyne Farmaajo iyo madaxdii hore